Noocyada canabka ah ee hore | February 2020
Waa maxay canab wanaagsan hore? Wuxuu si dhakhso ah u raraa in cudurada fangasku aysan ku sii soconin koritaankiisa. Iyo, dabcan, waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxaysato miro qorrax leh, marka dadka kale ay filanayaan goosashada. Kala duwan xilliga canabka ah "Violet" Caleemaha kala duwan "Violet" waxaa loola jeedaa noocyo hore. Waxay ku filan tahay in ay u adkaysato dhaxan daran waxayna leedahay heer aad u sareeya oo iska caabisa cudurada kala duwan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada canabka ah ee hore 2020